Hargeysa: Mid ka mid ah Xarumaha ugu Waaweyn Sheybaadhka Caafimaadka oo Gubatay iyo Gurmadkii Ciidanka Dab-demiska | Somaliland Post
Home News Hargeysa: Mid ka mid ah Xarumaha ugu Waaweyn Sheybaadhka Caafimaadka oo Gubatay...
Hargeysa: Mid ka mid ah Xarumaha ugu Waaweyn Sheybaadhka Caafimaadka oo Gubatay iyo Gurmadkii Ciidanka Dab-demiska
Hargeysa (SLpost)- Dabxooggan ayaa xalay saqdii Dhexe ka kacay oo qabsaday Xarunta Caafimaadka ee Hayat Diagnostic Center ee magaalada Hargeysa, waxaana deminta dabka ka kacay goobtan ka hawl-galay ciidanka Dab-demiska Qaranka.
Hayat Diagnostic Center oo ayaa ka mid ah Xarumo faro-ku-tiris ah oo ku Shaqeeya Sheybaadhada kala duwan ee dhinaca Caafimaadka ee ku yaalla magaalada Hargeysa, gaar ahaan ka soo horjeedka Sinimoogii hore ee Hargeysa.
Dabka ayaa Abaaro 2-dii Habeenimo ee Saqdii Dhexe ee Xalay ka kacay Xarunta Caafimaadka ee Hayat, waxaana markii u soo gurmaday Ciidanka Dab-demiska oo gurmad ballaadhan ka geystay deminta dabka, iyadoo hawl-galkaas la soo gebo-gabeeyey abbaaro 6-dii subaxnimo ee Saaka, sida ay sheegeen Ciidanka Dab-demisku.
War-saxaafadeed ka soo baxay Xarunta Ciidanka Dab-demiska Qaranka oo lagu faahfaahiyey qaabkii ay ciidanku uga hawl-galeen iyo baaxadda Dabka qabsaday goobta, ayaa u qornaa sidan:-
“Abaaro 2:45 ee habeenimadii xalay ayaa dab xoogan ka kacay goobta sawirada Caafimaadka ee Hayat Diagnostic Centre, dabkan oo ahaa dab laxaad leh ayaa ka bilaabmay dhismaha oo ka koobnaa laba qaybood, dhisme hore iyo dhismayaasha dambe ee casriga ah.
Dabkan waxaa ka hawlgalay 12 Gaadhi oo Dab-demis ah iyo 85 Xubnood oo heegan u ahaa hadii dabku sii fido, kuwaasoo ka kala yimi dhamaan xarumaha ciidanka Dab-demiska Caasimada Hargeysa.
Waxaa dabkan dhaawac ka soo gaadhay 4 Xubnood oo Ciidanka Dab-demiska ah, kuwaasoo ku hawlanaa xakamaynta iyo nabadgelyanta qalabka cusbitaalka.Dhinaca kale Taliyaha Ciidanka Dab-demiska sareeye guuto Axmed Maxamed Xasan Sawaaxili ayaa isagoo hawlgalka ku jira laba jeer ku siibtay marmarka goobtaas.
Ma jirin khasaare nafeed iyo mid dhaawac toona oo dabkaasi sababay, waxaana ciidanku goobtaas tageen iyadoo albaabada iyo daaqaduhu xidhanyihiin dabkuna is haysto.
Hawlgalkan ayaa ilaa habeenimadii xalay ilaa saaka subaxdii hore ay heegan ku ahaayeen goobtaas Taliyaha Ciidanka Dab-demiska, Taliye Xigeenka,Agaasimaha Fulinta Ciidanka Dab-demiska iyo dhamaan saraakiisha ciidanka, sidoo kale waxaa iyaguna hawlgalkaa ka qayb qaatay labada Taliye qaybeed ee Ciidanka Booliska Caasimada iyo xarumahooda.
Dabkan ayaa la soo gabagabeeyay abaaro 6:45 Subaxnimo ee subaxnimadii hore saaka, waxaana ciidanka Dab-demisku badbaadiyeen hanti badan oo dhex taalay dhismaha goobtaas, iyadoo dhamaan dabkaas laga hakiyay dhismaha cusub ee xarunta oo ay yaalleen qalab aad u farabadan.” Sidaa ayaa lagu sheegay war-saxaafadeedka.
Muuqaalka Hoose ka daawo Hawl-galkii Ciidanka Dab-demiska iyo baaxadda dabka qabsaday Xarunta Caafimaadka ee Hayat.